Iyo Apple Watch inoponesa wechidiki zvakare | Ndinobva mac
Apple Watch inoponesa wechidiki zvakare
Hapana imwe nhau iri nani pane kumuka mangwanani uye kugamuchira maemail akati wandei achidaro Apple Watch yakachengetedza hupenyu. Handizvitaure anodaro Jeff Williams, director wekushanda kwekambani. Patova nenhau dzinoverengeka dzekuti Inonyatso kuzivikanwa Wareable yakachengetedza hupenyu hwevanhu vakati wandei pasirese.
Zvekare tine imwezve nyaya nezvekuti sei Apple Watch yaona kusagadzikana mumunhu anoita seane hutano Uye sekunge mushure mekuongorora hutano hwake, aifanira kuvhiyiwa kuti aponese hupenyu hwake.
Mumwe mutambi wechidiki akachengetedza kutenda kuApple Watch
La electrocardiogram basa Apple Watch inoshamisa chete. Iwe unokwanisa kunyatsoongorora kupomba kwako uye kugona kuona zvisizvo zvingangoda kurapwa. Asi izvi zvinoshanda chete kana iwe ukazvimisikidza nemaoko. Saka Kune rimwe basa iro iro wachi rinozozvimiririra roga kana chimwe chinhu chikatadza.
Mudzidzi mudiki aive mukirasi nguva iyo nguva payakatanga kumuyambira kuti chimwe chinhu hachina kumira nemoyo wake. Kwechinguva, moyo wake waipomba pa19 kurova paminiti, akagara mukirasi. Uyu mutambi wechidiki akazivisa amai vake uye akamutumira iyo skrini yeiyo wachi data.
Vakabva vaenda kuna chiremba kumusha kwavo Oklahoma, uye kushamisika kwejaya nemhuri yake iwe wakabatwa uine Supraventricular Tachycardia (yakakurumidza kurova kwemoyo, ndiko kurova 175-220 paminiti pazororo). Panguva yekunyeverwa kwewachi, yeuka kuti chiyero chakaonekwa chaive 190 bpm.
Kutenda ichi chiziviso uye kushanya nekukurumidza kwachiremba, mutambi wechidiki akakwanisa kuponesa hupenyu hwake mushure mekuvhiya kwakakodzera mune idzi kesi. Zvinoenderana nenhau dzemuno, jaya racho rakakwana uye adzokera pane zvakajairwa muhupenyu hwake hwemudzidzi nemitambo.
Zvinofadza kugona kunyora nezve iyi nhau. Aya ndiwo maratidziro atinoshandisa mazuva ese. Inoshanda uye inoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch inoponesa wechidiki zvakare
Apple inofanira kubhadhara vashandi vayo veApple Chitoro nguva yavo yekuwedzera